एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर अमेरिकी स्टेर्स एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 21, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "नूडल"। हाम्रो एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन र उनको बारे धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा जान्दछ तर केहि कम मान्जिन डि मारिया जीवनी जो निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
एन्जेल फबिलन दी मारिया Hernández जन्म सेन्ट वेलेंटाइन दिवस, 14 मा जन्मियोth फेब्रुअरी, 1988 रोजारियो, अर्जेन्टिनामा। सहयोगीहरू ईसाई एरिक्सन र एडिंसन काभनी, डे मारिया सार्वजनिक आँखा मा सबै भन्दा सफल फुटबलर हो जसलाई स्टेट वेलेंटाइन डे 1988 मा विश्वमा प्रवेश गरेको छ।
परेरियल मा बढ्दै, तिनी आफ्नो आमाका तीन छोरा, दिआना हर्न्डेन्ड र बुबा, माइगेल डि मारिया थिए। एक शिशुको रूपमा, एन्जिल डि मारिया खेलकुदमा असामान्य रूपमा सक्रिय थियो, र तीन वर्षसम्म फुटबलको लागि एक डाक्टरको सिफारिसमा साइन अप गरियो। एन्जिलले फुटबल अभ्यास गर्न थालेपछि केटाकेटीको आमाबाबुले उनीहरूलाई बिस्तारै ऊर्जाको बाटो दिनको लागि खेलकुदमा जाने अनुमति दिए।
"म बच्चाको रूपमा बेग्लै थियो, म हाइपरकिन्थी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टरले मलाई यसो भने: 'केटाले केही खेल गर्नु पर्छ र ऊ शान्त हुनेछ।' र यसको सट्टा ओf कराटे, हामी पीउसलाई फुटबल खेल्न दिनुहोस्। "
उनी फुटबल खेल्दा पनि उनले आफ्नो आमाबाबुलाई स्थानीय कोइलाहाउसमा आफ्नो कामको साथ सहयोग गरेकी थिईन् उनीहरूका दुई बहिनी, भ्यानेसा र एवलिन। कम आयको कारण, तिनको परिवारले कमाई, फुटबल जूताहरू खरिद गरिरहे र डे मेरियाको शौक संग रहन उहाँका आमाबाबुको लागि गाह्रो थियो।
एन्जिल डि मारियाको अनुसार, ..."यो केहि चीज छ कि म सधैँ भित्र भित्र रहनेछु। मेरो लागि फुटबल खेल्न र ब्वाँसोहरू मेरो दुई बहिनीहरू बिना गएनन् " उनले एक साक्षात्कारमा भने। "यो एक भयानक अस्तित्व थियो र जब wईथर खराब थियो सबै तिनीहरूका टाउकोमा धातुको छत थियो। तर मलाई र मेरो बहिनी दुवै काम गरे tत्यो पनि कोइलार्ड यार्ड। मैले 10 उमेरको सुरुवात गरें र जब म 15 हुँ, मैले डेलिभरीको साथ मद्दत गरिरहेको थिएँ। यो कडा परिश्रम थियो। "
यो राज्यमा उल्लेखनीय छ कि दि मारिया 1995 मा स्थानीय क्लब रोजारियो सेन्ट्रल क्लब (सात वर्ष को उमेर मा सानो सानो समूह को लागी देखी र 30 फुटबल को बदले मा खरीदा छ) र 2005 मा युवा अकादमी देखि स्नातक भएको थियो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एन्जिल डि मारियाको प्रेम कथा एक महिलाको वरिपरि केन्द्रित छ।
त्यो गोल्ड अर्जेन्टिनाशियन, जर्जेलिना कार्डोसो भन्दा अरु कुनै होइन जुन यसको तुलनामा5वर्ष भन्दा पुरानो छ। जर्जेलिना अर्जेन्टिना वरपर उनको एक राम्रो-आजको शरीर सुन्दरताको लागि चिनिन्छ। यसैले डाय मारिया उनको बेनिकाका क्यारियर हाइट्स को समयमा उनको सम्पर्क गरे। एक समय उनी पोर्चुगलका सबै समाचार पत्रहरूले "जादुई ट्राइ मारिया" नामकरण गरे। डिएगो मराडोनाले बन्यो एक पटक उनीहरूको समर्थन थियो "अर्जेंटीनाको अर्को सुपरस्टार" #:।
अर्जेण्टिना मिडियाले जेर्गेलिनालाई उनको फुटबल-खेलिरहेको पतिको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसकको रूपमा वर्णन गऱ्यो र तिनी डिन मारियाको आलोचनाको हिसाबमा कसैको कानमा डराउन डराउँदैनन्। यसले कुनै समय अघि नै डिया मारियालाई उनको प्रबन्धकको रुपमा राखेको छ।
उनी अर्जेण्टीनाको सफलता पछि मस्तिष्क थियो। उनको साथ, डा मारिया पिच मा अधिक भरोसा भयो। यसले उनीहरूलाई रियल म्याड्रिडमा पोर्चुगल स्टक एक्सचेन्ज नियामक निकायद्वारा चकित रूपमा घोषणा गरेको छ।
यी सबै सफलताहरू देखेर एन्जिल डि मारियाले आफ्नो साथी अर्जेण्टीना जोर्जेनिना (नो कार्डियोस) को लागि आफ्नो प्रेमलाई सीमान्त गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूले 2011 मा विवाह गरे (उनीहरूले भेट्न दुई वर्ष पछि)।
एन्जिल डि मारियाको विवाह फोटो
2013 मा उनीहरूका छोरी मिया जन्मियो। उनको बिरामीको कारण, केटीले अस्पतालमा दुई महिनाको लागि बस्न थालेको थियो।
यो एक धेरै कठिन अवधि थियो, "जर्जिटा" लाई उनको Instagram खातामा पोस्ट गरियो।
मिया, जो तीन महिना पहिले नै जन्म भएको थियो र मेड्रिड मा अस्पताल यूनिवर्सिटियो मोंटेप्रिन्सेप मा एक गहन हेरचाह को उपचार पछि बचाइयो।
धन्यवाद मिया तिनको डराएर बच्यो। उनको पहिलो जन्मदिनमा, जगर्गिनाले Instagram मा फोटोहरू प्रकाशित गरे, लेख, "कुनै पनि तर पिताजी र मलाई थाहा छ कि तपाइँको अनुहारलाई मेडिकल केबुलमा राख्ने कत्तिको दुखाइ थियो।"
उनले जारी राखे ...।
"त्यहाँ अस्पतालबाट खाली हतियारसहित घर जाने भन्दा दुखी छैन। आँसुले हाम्रो तकियाहरू हर रात झिक्यो। र अब हामी भन्न सक्छौं कि तपाईं एक बलियो, स्वस्थ, खुसी केटी हुनुहुन्छ। तपाईंले हाम्रो जीवनको लागि आफ्नो जीवनको लागि युद्ध जित्नुभयो। "
एन्जिल डि मारिया र पत्नी बेटीको जन्मदिन मनाउँछिन्
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
एन्जिल डि मारियाको परिवार ला सिरेमाको धेरै भन्दा धनी थिएनन्। उहाँ गरीब परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउनुहुन्छ।
आज, डि मारिया आफैं बन्ने कुरा बुझ्छ "पारिवारिक मान्छे" र उनको वेतन को एक महत्वपूर्ण राशि को उपयोग गरेको छ "फिर्ता दिनुहोस"उनको परिवारमा। बेनिफिकामा पठाइने भएपछि, उहाँले आफ्नो पितालाई अब काम नगर्न र आफ्नो आमाबाबु र बहिनीहरूको लागि एक घर खरिद गर्न आग्रह गरे।
एन्जेलको बूढो पुरुष, माइग्युएल पनि एक सभ्य फुटबल खेलाडी थिए, तर उनले एक क्यानाडा प्ले प्लेयर बन्ने सपना देखाएपछि उनको क्यारियर-समापन घुटनेको चोटको सामना गर्नुअघि उनको पहिलो पटक हुन सकेको थिएन। यसको सट्टा, उहाँले 16 वर्षको लागि एक कोइलाखोलामा काम गर्नुभयो, अल्पसंख्यक वेतन कमाई। उनको दुई बहिनीहरु संग एक कोठा साझा गर्दै, माइगेलको छोरा एन्जलले चाँडै एहसास गरे कि फुटबलको लागि एक राम्रो जीवन प्राप्त गर्ने मौका थियो (लिओनेल मेस्सी रोसियोियोमा पनि उनीहरुसँग खेल्दथे, यद्यपि उनीहरूको मध्य-कक्षा अप्ठ्यारोले बढी गुलाबी बचपनको लागि मार्ग प्रशस्त गरे)।
तिनका शब्दहरूमा ...।"म प्रायजसो लाग्छ कि म कसरी भाग्यशाली छु कि फुटबल छ। म भयानक विद्यार्थी हुँ। यदि मेरो पासो छैनसबै मलाई कोइलाखोलामा काम गर्न जारी छ। मैले के गर्नु पर्छ र? म मेरो बुबाको लागि हार्दिक हुनुहुन्थ्यो किनकि उसले फुटबल खेल्न सक्छ तर नदी प्लेट को भंडार को लागि गहिरो घुटने चोट खेलयो। मेरी आमाले मलाई मलाई सम्झना दिलाउँछ कि म कसरी भाग्यशाली छु र म के गरिरहेको छु कि मेरो बुबाले गर्न चाहानुहुन्छ, म उनीहरूको सपना जिउँछिन्, " उनी सम्झन्छन्।
मातृभाषा: डाना Hernandez, एन्जेल डी मारिया को आमा फुटबल मा उनको छोरा को भागीदारी पछि मुख्य मस्तिष्क हो।
उनको पतिले फुटबललाई खेलकुदमा विफलताको बारेमा सोचिरहेका थिए। जान्दछ कि उनको पति अझै पनि फुटबलको बारेमा भावुक थियो, तिनले उनलाई धक्का दिएका थिए कि कुन कुरा आयो।
उनले निर्णय गरे कि सानो स्वर्गदूत, उनको पहिलो बच्चा, डाक्टरले सिफारिश गरे पछि फुटबल खेल्नेछ। सानो एन्जिललाई उनीहरूको युवा अतिशैलीपन नियन्त्रण गर्न एक खेल (मार्शल आर्ट वा फुटबल) अभ्यास गर्न सकिन्छ।
आफ्नो पत्नी जोर्जेलिना कार्डोसोको पक्षमा, डेना हर्नाण्डेजले आफ्नो छोरो दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक बनी।
डायना Hernández- डि मारियाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक
SISTERS: एन्जिल डि मारियाले दुई बच्चा बहिनीहरू एभिलिन डे मारिया ह्यारेन्डेज र वेनेसा डि मारिया ह्यारेन्डे नाउँ गरेका छन्। पछिल्ला दिन, एभिन र भ्यानेसा स्थानीय आमाबाबु र कामदारको साथ आफ्नो भाइबहिनी र वृद्ध भाई (एन्जिल) को सहयोगमा सहायक थिए।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -टैटू तथ्य
धेरै फुटबलरहरू जस्तै, उनी आफ्नो टैटूमा उत्सुक छन्। बेनिकाका लागि छोड्नुभन्दा अघि, उनी र छवटा बचपनका साथीहरूसँग तिनीहरूको बाहिरी भाषणमा समान शब्द थियो: "एल पेर्रेलमा जन्मेको थियो र मेरो जीवनमा मेरो साथमा सबैभन्दा राम्रो कुरा हुनेछ।"
यो तल देखेर अर्जेण्टीनाको मामला हो।
Di Maria Maria Tattoo Facts
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -रियल म्याड्रिडमा अभियुक्त हुँदा उनी किन चुप लागे
एक पल्ट एक पल्ट, रियल म्याड्रिड उनको क्लब मा राम्रो प्रदर्शन को बावजूद विंगर बेचन गर्न चाहता थियो। यो गेटथ बेले, अर्को बायाँ-फुटर (जसले पनि हृदयको आकारको गोल-गोल गर्ने उत्सवको लागि विश्व-रेकर्ड पाउन्ड 80 मिल्यो) भत्किएको थियो, तर डि मर्फले दृढ बनायो। उनले उनीहरूलाई घृणा गर्थे किनकि क्लब संग एक शो प्रदर्शनको अनुरोध गरेनन्। उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो किनकी उनको छोरी को समय मा गंभीरता देखि अस्वस्थ थियो।
प्रभावशाली रूपमा विङ्गरले आफ्नो व्यक्तिगत नाटकलाई आफ्नो क्लबको लागि आफ्नो प्रदर्शनलाई असर गर्न अनुमति दिए र इन्टरनेस्कोको म्याद्रिड डर्बी बनाएर अटटिकोमा पाँच दिन पछि विजेतालाई पनि जित्न अनुमति दिएनन्। 2014 चैंपियन्स लीग फाइनलमा फाइनलको यूएई म्यान जित्ने बावजुद तिनी अझै बेचेका थिए। लेखनको समयमा, अफवाहहरू अस्तित्वमा छन् कि उनी आफ्नो बदला लिन एफसी बार्सिलोनामा जान्छन्।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उनको बारेमाको बारेमा
उहाँको उपनाम हो 'फीडियो', नूडल, आफ्नो पतला शरीर को रूप मा तल देखाइएको छ।
Di Maria's Physical Looks About Facts
शारीरिक रूपमा लागू भइरहेको भए तापनि, एन्जिल प्रकृतिको एकदमै कठिन कामदार हो। एक प्राकृतिक स्ट्राइकर पनि को रूप मा, उनको रक्षात्मक प्रवृत्तहरु छ।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -जेल सजाय
मध्य-2017 मा, एन्जिल डे मारिया कर धोखाधड़ी स्वीकार गरेपछि एक वर्ष जेलमा सजाय भयो।
चार्ज अर्जेण्टीनी स्टारको समय रियल म्याड्रिडसँग छवि अधिकार सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। उनी बर्नबेउमा आफ्नो चार वर्षको वर्तनीको समयमा £ 1.14million को स्पेनिश सरकारलाई धोका दिएका छन्। उनले भनेका छन् कि धोखाधडी को दुवै अंकहरुमा भर्ती भएको छ र स्पेनी उच्चतम न्यायालय मा एक परीक्षण देखि बचने - £ 1.76million को ठीक को भुगतान गर्नेछ।
जेल सजायको बावजूद, मारिया कुनै पनि समयमा बारम्बार पछि बिताउने सम्भावना छैन। स्पेनमा दुई वर्ष भित्रको निलम्बन निलम्बन गरिएको छ भने प्रदान गर्न को लागी कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -किन त्यो संयुक्त राष्ट्र छोड्यो
दुर्भाग्यवश घटना म्याच मैनचेस्टर युनाइटेडमा भयो।
डे मारियाको घर Prestbury, Cheshire, 31 जनवरी 2015 मा बर्गर गरिएको थियो। चोरहरूले पहिले मैनचेस्टर युनाइटेड विंगरको घरमा ब्रेक-इन पछि घर फर्कन सकेन। यसले उसलाई दिनभरि झिक्यो र मैनचेस्टर युनाइटेड र इङ्ग्ल्यान्डमा रहनको लागि अन्त्यको सुरुआत गर्यो।
युनाइटेड द्वारा घडीको सुरक्षाको बावजुद, दी मारियाले आफ्नो परिवारलाई टाढाको होटेलमा स्थानान्तरण गरे। उनले अर्को ट्राफिक सञ्झ्यालमा संयुक्त र इङ्गल्याण्ड छोड्यो।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -त्यो घटना जन्मिएको हो जुन घटना भयो
दिन डे मारिया जन्मेको थियो, बज अल्डिन, चन्द्रमा हिंड्ने दोस्रो व्यक्ति, 58 को उमेर मा आफ्नो तेस्रो पत्नी लोइस ड्रेग्सग कन्यासँग विवाह गरे। तिनीहरू अब तलाक हो र निस्सन्देहले उनीहरूलाई मर्सिडीज राख्ने सक्षम बनाएको छ, जसमा 'मोबाइल' नम्बर प्लेटहरू छन्।
एन्जिल डि मारिया बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उनको आइडल
यो पनि अर्जेण्टीना डिएगो माराडोना पनि होइन जो धेरै समय मा दी मारियाको प्रशंसा गर्न जान्छ।
एक जवानको रूपमा, उनको मूर्ति किली गोंजेलेज, पूर्व वेल्सेन्सिया र इन्टरनेट विन्गर थियो जसले अर्जेन्टिनाका लागि 56 टोपहरू कमाए र मुख्यतः बायाँ-पैदल, डे मेरिया जस्ता थिए।
उनले 1995 मा रोजारियो सेन्ट्रल को लागि गोंजाले खेलयो र त्यसपछि उनको एक्स-एमट बने जब एक्सएनएनएक्सए उमेर मा पहिलो टीम लाई बढावा दिए। हालै मा मारियाले सम्झना गरे कि उनी उनको बिरुद्धमा कसरी गुस्सा छोडेर गोंजलेज एकेडेमीमा उनको रिस उठ्यो। "ती चीजहरू जुन तपाईं कहिल्यै बिर्सनुहुन्न," उसले भन्यो।
हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
अर्जेण्टिना फुटबल डायरी
बेनफिका फुटबल डायरी
मैन संयुक्त फुटबल डायरी
पीएसजी फुटबल डायरी
रियल म्याड्रिड फुटबल डायरी
डान-एक्सेल Zagadou बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
गेडसन फर्नांडिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Lorenzo Sanz चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
vannyhenrico - मार्च 29, 2020
डानिएले रुगानी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
vannyhenrico - मार्च 29, 2020 0
vannyhenrico - मार्च 25, 2020 0
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अप्रिल 16, 2017
डिसेम्बर 1, 2017
सर्जियो रमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जोस Mourinho बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 13, 2017
करीम बेंजमा बालुवा स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
सेप्टेम्बर 16, 2017
एंथोनी मार्शल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य